3 Arrimood Oo Kaa Caawinaya In Howsha Sariirta Aad Waqti Dheer Wado - Aayaha
Aayaha editorNovember 22, 2019
Biya baxa deg dega ayaa ah wax caadi ah sidaa darteed ha isliidin hana niyad jabin. Nasiib wanaag badanaa dadka horey ka biyo baxa ayaa baran kara sida howsha loo dheereeyo.
Jimicsiyada iyo habab kale oo fudud ayaa gacan ka geysan kara in howshu ay dheeraato.
Kuwani waa qaar kamid ah farsamooyin kaa caawinaya inaad howsha dheereeyso oo biyuhu dhaqsi aysan kaaga imaan.
Raaxeyso oo dhiirigeli naftaada
Welwelka iyo shakiga ayaa ah dilaaga dareenka qofka, sidaa darteed isku day inaad noqoto qof isku kalsoon. Galidda kulanka sariirta adigoo isku kalsoon, naftaada ixtiraamaya isla markaana leh hab dhaqan wanaagsan ayaa isbedel weyn idiin sameyn kara adiga iyo lamaanahaaga.
Halkii aad si xun uga fikiri lahayd bandhigaaga si wanaagsan u feker, haddii ay feker kugu heyso inaad si dhaqsi ah howsha ku dhammeyso ama biyaha ay deg deg kaaga yimaadaan oo ay arrintaas niyad jab kugu heyso, waad xakameyn kartaa arrintaas.
Jimicsi caadi ah
Inaad jimicsato ayaa waxbadan kaa caawin karta markay noqoto howsha sariirta maadaama jimicsigu uu kaa caawinayo inaad howsha muddo dheer waddo.
Jimicsashada xoogaa waqti ah todobaadkii iyo dhowr saacadood maalintii ama dhowr daqiiqo ayaa kaa caawin karta in shahwada aysan dhaqsi kaaga imaan.
Jimicsiga lafta miskaha (pelvic floor)
Lafta miskuhu waa koox muruqyo iyo carjaw ah oo kaalmeeya kaadi haysta, ilmagaleenka iyo
Malawadka, jimicsiinta murqaha kontaroola kacsiga ayaa kaa caawin kara inaad howsha sariirta waddo muddo dheer. Si aad u jimicsiiso murqahaan adkeey murqahaan 3 ilbiriqsi, naso 3 ilbiriqsi hadana sameey 5 illaa 10 jeer.
Wuu kuu fududaan karaa jimicsigaan adigoo dhulka jiifo ama fadhiyo balse isku day inaad sidoo kale istaag ku sameyso.
Si aad u adkeyso murqaha waxaa lagaa doonayaa inaad maalin waliba sameyso jimicsigaan intaad awoodid. Isku day inaad adkeyso murqaha koontaroola kaadida . Kaliya ha dhaqdhaqaaqin badhida ama bowdyahaaga.
Si caadi ah u neefso iskana ilaali inaad neefta isku celiso.
5 benefits of rosemary you probably never knew about